Naing BSell | Item - Playstation3 Super Slim / 500Gb (Singapore Used)
More from "Best Friend Forever"
# Portable Handheld Stabilizer # (Brand New Set)
Photoshop & Lightroom Training Video By Photoserge
Playstation3Games (Used)
Creativemarket 300 Premium Lightroom Presets
# Playstation3 Super Slim / 500Gb (Singapore Used) # **No Jail break / No Modified**
PS3 Game စက်ဈေးတန်တန်လေးတစ်လုံး ထပ်ရပါပြီခင်ဗျ . . . ထူးခြားတာက သူ့ရဲ့ Internal Harddisk ထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့ PS3 Game (4) မျိုးနဲ့ PS1 Game (1) မျိုး လက်ဆောင်ပါဝင်လာတာပါ။ ပါဝင်တဲ့ Game တွေကလဲ Game ကောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ခွေဖိုးနဲ့တွက်ရင်ဈေးက တော်တော် တန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Internal HDD capacity က 500GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ Accessories တွေက . . .
- Dual Shock3Original controller x 1
- Free Game x 1
- HDmi Cable + Power Cable + Charger Cable , စသည်တို့ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Used ပေမယ့် Personal Warranty 1 week ပေးထားတာကြောင့် (1 week) အတွင်း သုံးစွဲသူ၏ လွဲမှားအသုံးပြုမှုကြောင့်မဟုတ်သော ပြစ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားပါက စက်အစားထိုးလဲပေးခြင်း (သို့) ငွေပြန်အမ်းပေးခြင်း စသည်ဖြင့် ဝယ်ယူသူအဆင်ပြေစေရန် တာဝန်ယူပေးသွားမှာပါ။
***ဈေးနှုန်း - 260,000ks***
Shipping ~ 2/3 weeks